Imigomo nemibandela - Alietc.com
SICELA Ufunde IMIBHALO YAKHO NEMIHLAZO. UKUZE BABHALISE KABI BONKE futhi SISEBENZISE AMAKHONO EENKONZO ZETHU, KUFANELE ATHATSHELE UKUZE ATHANDE.
Uyemukelwa e-ALIETC! Umholi wembulunga yonke e-commerce ne-inthanethi eku-inthanethi Le migomo nemibandela ichaza imithetho efanelekile ekufinyeleleni kwakho nasekusetshenzisweni kwewebhusayithi, isayithi leselula kanye nezinye izingosi zezindawo kanye ne-weBook esisebenza futhi ephethwe yi-ALIETC.com.
Ukusetshenziswa nokwamukelwa kwemigomo
Ngokubhaliswa nokuvuma imigomo yethu yokusebenzisa ungaphansi kwemigomo nemibandela equkethwe futhi kuchazwe kulo mbhalo nenqubomgomo yobumfihlo. Izinsizakalo zethu (kufaka phakathi izinsizakalo Zokuphromotha kanye nanoma yikuphi ukulungiswa kwesikhashana noma okuphoqelekile) kufaka phakathi Ukufakwa ohlwini Okuphezulu noma Uhlu Oluxhasiwe kanye nanoma yimaphi amanye amasevisi angabikwa yi-ALIETC.com ngezikhathi ezithile. Lo mbhalo neminye imithetho nezinqubomgomo kubhekiswa kuzo ngokuhlanganyela 'Emigomeni'. Ngokubhalisa nangokusebenzisa noma yiziphi izici zamasayithi nemikhiqizo, uyavuma ukwamukela nokusebenza ngokuhambisana nayo yonke imigomo.
Imikhawulo Yeminyaka: Ukufinyelela nokusetshenziswa kwezinsizakalo ze-ALIETC.com, izici nesoftware nemikhiqizo ngamasayithi wethu kunqunyelwe kuphela kubantu abaneminyaka engokomthetho nangaphezulu. Iminyaka yakho yezomthetho kumele yamenyezelwe ukuthi yakha isivumelwano esibophayo nezinsizakalo zethu futhi labo ababhalisa ngomsebenzi wethu abangaphansi kweminyaka esemthethweni abavunyelwe ukuthola noma yiziphi izinsiza ngaphansi komthetho Wezizwe, kubandakanya nesifunda noma izwe ohlala kulo, noma olisebenza kulo kusuka. Noma yimuphi umuntu otholakala enza isimangalo ngamanga ngokuya ngeminyaka yabo esemthethweni, kufanelekile ukuthi asuswe ngokushesha leso ndawo futhi akhawulele ukusivinjelwa ku-akhawunti yakhe.
Okwenziwayo phakathi Kwabathengi Nabathengisi: com ihlinzeka ngamapulatifomu e-intanethi elekhompyuter okushintshana, ukuthenga nokuthengisa ulwazi nokuthenga. Abasebenzisi bayakwazi ukuphatha, ukwamukela, ukubeka nokuphetha ama-oda nokunikezwa kwemikhiqizo. I-ALIETC.com ayilawuli noma ibanjwa inecala noma ibhekele abathengisi noma ukungakwazi komthengi ukuqeda ukuthenga. I-ALIETC.com futhi ayibophezeli ukuphepha, ukuba semthethweni, noma ukutholakala kwemikhiqizo noma izinsizakalo ezishintshanisiwe endaweni yayo yesikhulumi.
Izichibiyelo:com angenza izinguquko kanye nezichibiyelo ku-Imigomo Yazo Nenqubomgomo Yobumfihlo nganoma yisiphi isikhathi ngokuthumela izinguquko ezifanele nezibuyekezo kumigomo yazo yokusebenza kanye nemininingwane yesayithi. Ngokuqhubeka nokufinyelela insizakalo ngemuva kwalesosikhathi, uvumelana nemininingwane engenisiwe nebuyekeziwe. Yonke imininingwane elungisiwe nebuyekeziwe izosebenza kuwe uma ishicilelwe ku-Imigomo Nemibandela Nemininingwane Yendawo.
Yenza imisebenzi ngokulandela imithetho yendawo kanye nemithetho esebenzayo
Yenza ukuthengiselana kwebhizinisi ngokholo oluhle
Ungasebenzisi isayithi ukuphamba abanye abantu
Ungazibandakanyi ku-Spamming noma i-Phishing
Ungazibandakanyi emisebenzini noma ezinhlelweni ezonakalisa ukuthembeka kwedatha, amasistimu noma amanethiwekhi asetshenziswa yi- ALIETC.com
Ungafaki amagciwane ekhompyutha noma enye isoftware eyonakalisayo
Ungazibandakanyi kunoma yimuphi umsebenzi ongekho emthethweni, njengokukopisha, ukukhiqiza kabusha noma ukuxhaphaza noma iyiphi ingxenye yezinsizakalo ze-ALIETC.com
Nikeza imininingwane efanele kamazisi.